Izindatshana zika-Amit Khanna zivuliwe Martech Zone |
Imibhalo nge U-Amit Khanna
U-Amit Khanna unguMongameli Wezamabhizinisi Amancane Naphakathi naphakathi I-infogroup lapho enesibopho sokushayela imali engxenyeni enkulu yenkampani nokwakha ubudlelwano bamalayisense abalulekile. Ubuye wahola nemikhiqizo emibili ephumelelayo yenkampani iSoftware-as-a-Service, i-InfoUSA ne-Salesgenie.
Amaphutha Amahlanu Abucayi I-imeyili Yakho Yokumaketha Uhlelo Kufanele Ilugwebe
NgoLwesithathu, Okthoba 29, 2014 NgoLwesithathu, Okthoba 29, 2014 U-Amit Khanna
Ngabasebenzisi abangaphezu kwezigidi ezingama-222 e-US kuphela, i-imeyili inamandla amakhulu njengesikhulumi sokumaketha. I-imeyili iyithuluzi eliguquguqukayo elingasetshenziselwa ukufudumeza umkhondo obandayo, ukuxhumana namakhasimende akhona kanye nokufinyelela kumathemba okuqhuba ukuthuthukiswa kwebhizinisi elisha. Ochwepheshe bokumaketha nge-imeyili baqonda izisekelo, njengokuqamba ukwenza umugqa wezihloko onamandla futhi kufaka phakathi ukubizelwa esenzweni okuqinile. Kepha nabathengisi be-imeyili abangomakadebona bangawa